Dib-u-warshadaynta qashinka: muhiimada, sida loo sameeyo iyo waxa loogu talagalay | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 28/04/2021 12:50 | Dib u warshadaynta
Mid ka mid ah qashinka ugu badan ee maalin walba la soo saaro ama maalin kasta guryaha dhexdiisa waa daasadaha. Dib-u-warshadaynta gasacadaha sheeg in ay tahay in lagu sameeyo waajibaad maadaama ay ka caawineyso yareynta qadarka alaabta ceyriinka ah ee loo isticmaalo waxayna noogu xaglineysaa la dagaalanka isbedelka cimilada. Dib-u-warshadayntu waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu isticmaalka badan si loo yareeyo soo-saarka iyo ururinta qashinka. Intaa waxaa dheer, waxay naga caawineysaa yareynta dhibaatooyinka la xiriira maaraynta qashinka oo liita.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida dib loogu warshadeeyo gasacadaha aluminium iyo waxa lagu sameeyo.
1 Dib u warshadee gasacadaha aluminiumka
2 Sida dib loogu warshadeeyo gasacadaha aluminium iyo halka lagu dhigo
3 Nidaamka dib-u-warshadaynta qasacadaha
4 Muhiimadda iyo baahida loo qabo dib-u-warshadaynta daasadaha
Dib u warshadee gasacadaha aluminiumka
Markaan ka fikirno weelka ururinta jaallaha ah waxaan marwalba xusuusan doonnaa caagagga. Isku soo wada duuboo waxaa loo yaqaan weelka balaastikada. Tani maahan sidaas. Noocyada kala duwan ee haraaga salka ayaa la dhigi karaa. Kaliya ma aha in dib loo warshadeeyo caagagga. Maalin kasta Waxaa na duqeeyey saf muhiim ah oo dib-u-warshadaynta waana sahlan tahay in la arko konteenarrada midabyo kala duwan leh meelaha u dhow meesha aad degan tahay. Tani waxay ka dhigeysaa qasacadaha dib-u-warshadaynta mid aan dhib ahayn.
Aluminium waa maskaxda saddexaad ee ugu maskaxda badan meeraha oo dhan. Qolofta dhulku waa mid jirta waxayna ka mid tahay dhagaxyada, dhirta iyo xayawaanka. Si kastaba ha noqotee, soo saarideeda waxaa lagu fuliyaa oo keliya iyada oo loo marayo bauxite. Bauxite waa macdanta leh waxyaabaha ugu badan ee curiyahan. Maxaa intaa ka badan, waxaa lagu soo bandhigi karaa iyada oo aan wasakh ahayn. Waa birta kaliya ee fudud ee bixin karta adkeysi marka lagu daro sifooyin kale oo badan sida ductility, malleability, caro-caabin, kuleylka iyo korantada iyo astaamaha kale ee ka dhigaya shey ku habboon warshadaha, dhismaha ama isticmaalka. .
Dhammaan astaamahan ay aluminiumku leeyihiin ayaa ka dhigaya dib-u-warshadeyn. Waana shey aad u tiro badan wuxuu u adeegsadaa xaqiiqda fudud ee ah inaan loo kala soocin dib u warshadaynta. Waxaa laga helaa qaybo ka mid ah guryaheena, oo ka sameysma qeyb tuubbo ah, weelal fudud oo cabitaanno iyo cunto ah, baakado, iwm. Tan ugu caansan waa in laga helo aluminium bulukeetiyo iyo daasado dib loo cusbooneysiin karo.
Sida dib loogu warshadeeyo gasacadaha aluminium iyo halka lagu dhigo
Waxaan horeyba u ognahay waxa ay yihiin isticmaalka kala duwan ee aluminiumku. Hadda waa inaan baranno dib-u-warshadaynta daasadaha aluminium. Tan awgeed waa inaan ogaannaa weelka aruurinta xulashada loo xulay tan. Kani waa weelka jaallaha ah. Waxaa loogu talagalay weelasha caagga ah sida ay yihiin dhalooyinka, boorsooyinka, cellophane, weelasha, furka, baakadaha polystyrene, IWM
Laakiin waxay ku fidsan tahay oo keliya gabi ahaanba baakadaha iftiinka in kasta oo qalab kale laga heli karo halabuurkiisa. Tusaale ahaan, markay tahay sanaadiiqda birta, koofiyadaha iyo daboolka iyo aluminium ama daasadaha birta ah. Khalad caadi ah ayaa lagu ridayaa qashinka weelka jaallaha ah oo ay tahay in lagu rido meelo nadiif ah sida aerosols, aaladaha la isticmaalo, alaabada carruurtu ku ciyaarto iyo walxo kale oo bir ah oo aan daasado ahayn.
Dib-u-warshadaynta Aluminium waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu dhex qasmayo caag isla weelka si loogu fududaado maaraynta. Marka qashinka lagu ururiyo weelka jaalaha ah gawaarida qashinka waxaa loo qaadaa warshad kala sooc ah. Sababtoo ah waxaa jira mashiinno awood u leh inay kala soocaan waxyaabaha kala duwan ee lagu rido isla weelka.
Aynu aragno maxay yihiin shuruudaha ay adeegsadaan mashiinnada si ay u kala soocaan waxyaabaha kala duwan ee lagu rido isla weelka dib-u-warshadaynta:
Cabbir: Nooc nolosha ka mid ah waxyaabaha ka yar 8 sentimitir ayaa la kala soocayaa.
Qaab iyo cufnaan: Jiitinka dhaqaaqa wuxuu u adeegaa inuu kala sooco walxaha culus ee salka sagxadda iyo walxaha fudud ee kor u kici kara. Mashaariic aad u fudud sida balaastiga balaastigga ah ayaa lagu nuugi karaa nidaamka faakiyuumka.
Qaab dhismeedka: daasadaha birta iyo aluminium waxaa soo xulay qaar ka mid ah kala-soocayaasha magnetic ama habka waxbaridda Sidan oo kale, waxaa la abuuray mowjado awood u leh inay dib u celiyaan birtan.
Nidaamka dib-u-warshadaynta qasacadaha
Waxaa jira xakamayn uu qofku ka qaybqaato. Hawl wadeenada ayaa mas'uul ka ah dib u eegista iyo kala soocida walxaha haddii loo baahdo. Kala saarid ayaa lagu sameeyaa gacanta si loo hubiyo waxtarka hawsha. Marka qalabka loo kala saaro qaybaha kala duwan Waxaa loo diraa warshadda dib-u-warshadaynta si loogu isticmaalo cusub uguna dhex jiro wareegga nolosha ee alaabooyinka..
Marka laga hadlayo aluminium, xargaha waaweyn ee birtan ayaa la sameeyaa waxaana la soo saaraa daasado iyo konteenarro cusub. Sababtaas awgeed, markay tahay dib-u-warshadaynta daasadaha, waxaan gacan ka geysaneynaa sameynta daasado cusub iyada oo aan loo baahnayn in dib loo isticmaalo alaabta ceyriinka ah iyo in la sumeeyo deegaanka. Ugu dambeyn, Waa in la ogaadaa in aluminiumku yahay shey si buuxda dib loo cusboonaysiin karo, sida kiiska ku jira muraayadda. Dib ayaa loo warshadeyn karaa marar aan tiro lahayn iyada oo aan lumin hantidooda ama astaamahooda. Tan awgeed, alaabooyin tayo leh ayaa markale la heli karaa iyadoon la adeegsan alaabta ceeriin.
Muhiimadda iyo baahida loo qabo dib-u-warshadaynta daasadaha
Sidii aan horay u soo sheegnay, qasacadaha dib-u-warshadayntu waa inay ku badan yihiin dhammaan guryaha ku yaal magaalooyinka. Soosaarka qashinkaan ayaa kordha sanadkasta isticmaalka agabkan wuxuu xal u noqon karaa wasakheynta. Inta lagu jiro howlaha dib-u-warshadaynta ee moorska waxaan gacan ka geysaneynaa yareynta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee lagu soo saaro jawiga inta lagu jiro soo saarida daasadaha iyadoo la isticmaalayo alaabta ceeriin.
Haddii aan yareyno xaddiga gaasaska lagu koriyo ee ku jira jawiga, waxaan gacan ka geysan doonnaa dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada. Waa inaan xasuusnaano isbedelka cimilada waa mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ee ugu daran ee soo food saara bani'aadamnimada qarnigan. Haddii aan ku guuleysanno kordhinta dib-u-warshadaynta daasadaha, waxaan si aad ah uga qayb qaadan doonnaa arrintan.
Sidaad u aragto, daasadaha dib-u-warshadayntu aad ayey muhiim u tahay uguna fudud tahay. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida dib loo warshadeeyo daasadaha iyo waxa lagu sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Dib-u-warshadaynta gasacadaha
Xayawaanka ugu dhifka badan adduunka